Iskuullada oo ey ka aloosan tahay caqabad macallin la'aan ballaaran - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Roald, Berit/TT
Iskuullada oo ey ka aloosan tahay caqabad macallin la'aan ballaaran
La cusbooneeyay måndag 14 augusti 2017 kl 11.47
La daabacay måndag 14 augusti 2017 kl 08.23
Caqabadda macallin-darrada ee ka aloosan iskuullada ayaa weli halkeedii ka sii socota. Tira-koob cusub ee ka soo baxay xafiiska shaqada - Arbetsförmedlingen wuxuu muujinayaa iney xafiiska ka diiwaan-gashanaayeen jagooyin macallin ee bannaan qiyaastii 7 000 bishii juulaay ee sannadka.
Dhowaantan oo uu bilaabmi doono sannad iskuuleedka 2017-2018 ayey iskuullo badani la koow-san doonaan macallimiin darro.
Xoogaa ayey hoos u dhaceen tiradii diiwaanka macallimiinta la la’yahey ee xafiiska shaqada 31-kii bishii jannaayo oo ey gaarsiisnayd 7 500, hase yeeshee weli ey ka diiwaan gashan yihiin xafiiska shaqada baahida loo qabo 7 000 oo macallin.
Farqi ballaaran ayaa u dhexeeya baahida macallimiinta ee gobollada. Galbeedka Götaland ayey kor u kacday baahida loo qabo macallinka 17%. Waa xaalad wax ka badashay shaqaaleeynta macallimmiinta, sida ay sheegtay maamulaha dugsiga Grevegårdsskolan ee magaalada Göteborg Ann-Charlotte Robb.
– Marar badan ayay dhacday in wareeysi la ballansado oo maalin ka hor uu baajiyo qofkii la damacsanaa in wareeysiga lala yeesho si loo shaqaaleeyo maadaama ay/uu shaqo kale helay/heshay. Waa xaaladda suuqa macallimmiintu sida ay iminka tahay, sida ay sheegtay.
Mid ka mid ah macallimiinta la shaqaaleeyey ayaa ah Emma Antti oo ka soo jeedda magaalada Göteborg. Waa macallimmad dhigta maadooyinka xisaabta iyo fiisikada, waana mid ka mid ah maadooyinka baahida ballaaran loo qabo.
– Waxaan ahaa ruux aad u cabasho badan. Waxaan doonayay goob shaqo oo deegaankayga u dhow, ahna shaqo buuxda. Xaqiiqdii waxay ahayd howl aan kala dooran karay, sida ay sheegtay macallimmad Emma Antti.
Sannadkan 2017 ayey tirada ardeyda barata macallin-nimadu 3% ka badnayd kolka loo barbar-dhigo xilligii midkan ka horreeyay. Hase yeeshee uu dhanka kale hoos u dhacay xiisaha barashada macallin-nimo, iyadoona tiro ahaan 2 000 in ka yar ey dalbatay tacliinta macallin-nimada.
Maria Rönn, ku xigeenka koowaad ee ururka daladda macallimmiinta ayaa aad uga welwel-san mustaqbalka, iyadoona sheegtay in loo baahan yahay siyaasiyiintu iney meel uga soo wada jeestaan su’aashan.
– Siyaasiyuunta waa iney joojiyaan dagaalka dhexdooda ee siyaasadda iskuullada si ey ku gaaraan xal waara ee mustaqbalka. Iyo in aan iskuulka loo fahmin inuu yahay goob caqabad ka aloosan tahay oo aany cidina xiiseenayn inay ka howl-gasho, sida ay sheegtay Maria Rönn, ahna ku xigeenka koowaad ee ururka daladda macallimiinta,
Linkiyada ku xiriira